Posterior Pituitary jekiseni - China Ningbo Second Uwandu hwemakemikari
Posterior Pituitary jekiseni
Posterior Pituitary jekiseni Posterior Pituitary ari-chaivo zvose chigadzirwa wakagadzirirwa nokuda dzokubudisa kubva nguruve pituitary shwanu. [Description] chigadzirwa Uyu Hauoneki yakajeka kana anenge segirazi zvokunwa. [Rinoshanda uye kushandiswa] chigadzirwa ichi chine oxytocin uye pitressin. Oxytocin anogona fadza uteruses zvokusarudza uye kusimbisa marwadzo ose uterine wakatsetseka tsandanyama. Its mugumisiro inonakidza uterine kumeso tsandanyama dzinosiyana maererano mishonga uye mahomoni mu vivo. A duku dose iwe ...
Posterior Pituitary ndiye ane -chaivo zvose chigadzirwa wakagadzirirwa nokuda dzokubudisa kubva nguruve pituitary shwanu.
chigadzirwa Uyu Hauoneki yakajeka kana anenge segirazi zvokunwa.
[Rinoshanda uye kushandiswa]
chigadzirwa ichi rine oxytocin uye pitressin. Oxytocin anogona fadza uteruses zvokusarudza uye kusimbisa marwadzo ose uterine wakatsetseka tsandanyama. Its mugumisiro inonakidza uterine kumeso tsandanyama dzinosiyana maererano mishonga uye mahomoni mu vivo. A duku dose zvibereko izvi zvinogona kuwedzera mutinhimira sunga ose uterine tsandanyama vane dzakafanana marwadzo uye kutandara mukunopera pamuviri; guru mishonga yacho chigadzirwa achaita tetanic marwadzo ose uterine kumeso tsandanyama achizviendesa nemidziyo ropa iri myometrium richiva hemostatic migumisiro. Uyezve, oxytocin anogona kusimudzira marwadzo ose myoepithelial masero akapoteredza mammary acini uye mammary ducts, kufambisa mashoko ejection mukaka. Pitressin ane mugumisiro antidiuresis uye kukwidziridza BP. Zvinonzi ainyanya kushandiswa:
1. Postpartum kukanganisika mukaka ejection, mammary kuzvimba, uye kukurudzira lactation mhuka hadzi vachangotanga wakaisa kushaiwei mukaka; mukaka inogona vabudiswa maawa 1-4 mushure jekiseni.
2. mukukurumidzisa parturition uye odinopoeia.
3. Hemostasis nokuti mhou 'hombe ropa.
4. Postpartum uterine ropa uye wakasara fetus membranes.
[ U somuzivi uye chipimo chemushonga]
1. Postpartum kukanganisika mukaka ejection, mammary kuzvimba, uye kukurudzira lactation mhuka vachangobva wakaisa hadzi Kusava mukaka: chimwe dose kuti intramuscular jekiseni: 20-40 inokwana zviyero namabhiza vakura uye mombe, kamwe zuva 3 anotevedzana mazuva; 10-20 inokwana zviyero makwai vakura uye nguruve, kamwe zuva 3 anotevedzana mazuva; 5-10 anokwana zviyero nokuti imbwa, katsi, makava, racoon-imbwa uye minks, kamwe zuva 3 akatevedzana mazuva.
2. Kukurumidzisa parturition uye odinopoeia: rimwe dose nokuda subcutaneous jekiseni kana intramuscular jekiseni: 30-100 inokwana zviyero namabhiza uye zvipfuwo; 10-50 inokwana zviyero makwai uye nguruve; 2-10 inokwana zviyero nokuti imbwa; 2-5 inokwana zviyero nokuti nekatsi.
3. Hemostasis nokuti mhou 'muhombe ropa: intravenous jekiseni; 100-150 inokwana zviyero nokuda chete dose (akawedzera 500ml kuti shuga kana yavaibvisa chloride jekiseni).
4. Postpartum uterine ropa uye wakasara fetus membranes: rimwe chete dose nokuda subcutaneous jekiseni kana intramuscular jekiseni: 30-100 inokwana zviyero namabhiza uye mombe; 10-50 inokwana zviyero makwai uye nguruve; 2-10 inokwana zviyero nokuti imbwa; 2-5 inokwana zviyero nokuti nekatsi.
1. Contraindicated pedo panguva basa pakubereka Canal abnormality, kanganisika fetus chinzvimbo, uye asi kuti-akazaruka cervixes.
2. mishonga High kunogona kukonzera pakukwirira BP, oliguria uye abdominal kurwadziwa.
10 x 1ml: 10 inokwana zviyero
Shaded uye zvakachengetwa vari murima uye akadzikama nzvimbo (pasi tembiricha 20 ℃).
[Term kuti ukoshi]
Previous: Pituitary Luteinizing Uwandu hwemakemikari kuti jekiseni (LH)
Next: Pregnant Mare Serum Gonadotropin kuti jekiseni (PMSG)
Pituitary Luteinizing Uwandu hwemakemikari kuti jekiseni (LH)
LHRH-A3 kuti jekiseni Bovines & penguruve
Cloprostenol Sodium jekiseni (D mhando PG)
Oxytocin jekiseni (Pitocin)
Gonadotropin nokuti jekiseni (GnRH)